१९ बैशाख - सभापतिजस्तो मान्छेले यस्तो हल्काफुल्का कुरा गर्नुहुँदैन। उहाँले यस्तै हल्काफुल्का कुरा गरेकाले पार्टीमा समस्या उत्पन्न भएको हो। बेमौसम बोल्दिनुहुन्छ, बेतुकको कुरा बोल्दिनुहुन्छ। बेढंगले रिसाइदिनुहुन्छ। कहिले प्रेसमार्फत् रिसाइदिनुहुन्छ, त्यसको...
१८ बैशाख - नेपालका राष्ट्रसेवक कर्मचारीकाे क्षमता अन्तर्राष्ट्रियस्तरको छ। यसको उपयाेग अहिलेसम्म हुन सकेकाे छैन, अब सरकारले उनीहरूकाे त्यो क्षमताको प्रयाेग गर्छ।
१४ बैशाख - प्रचण्डजीले त्यस्तो भन्नुभयो भन्ने कुरा मैले पनि पढें। यदि यस्तो कुरा भन्नु भएको हो भने गलत कुरा हो। यो गलत कुरामात्र होइन, यसले मलाई ‘प्रोभोक’ गर्ने कुरा पनि हुन्छ। मेरो स्वभाव सहेर बस्ने खालको छैन। तर ‘प्रोभोक’ भएर, यत्तिकै आँदो भएर लाग्ने...
१० बैशाख - ‘तस्करी, अपराध र आतंकवादी गतिविधि रोक्न नेपाल–भारत खुला सीमा बन्द गरिनुपर्छ। अहिले तत्कालका लागि बोर्डर आउट पोस्ट बढाउँदै लैजाने र ड्रोन उडाएर सीमाको निगरानी गर्ने हाम्रो योजना छ।’
२६ फागुन - नयाँ सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कस्तो हुनेछ भन्ने केही संकेतहरू आइसकेका छन्। नेपाल अब आफ्नै खुट्टामा बलियोसँग उभिन्छ। छिमेकीसँगको सम्बन्धमा यो सरकार दायाँ–बायाँ कोल्टे पर्दैन।
८ फागुन - माओवादीलाई माइनस गरेर मधेस केन्द्रीत दललाई मिलाएर सरकार बनाउने प्रयत्न भयो। त्यो गृहकार्य अहिलेपनि जारी छ। तर माओवादी र एमालेको जनमतविरुद्ध जानु भनेको अहिलेको परिस्थितीमा सकिनु जस्तै हो।
५ फागुन - एमाले नेता थममाया थापा मगर, ५८ एमाले केन्द्रीय राजनीतिमा पुग्ने थाेरै महिलामध्ये एक हुन्।
हिन्दूवादी राप्रपाको शाख क्रिश्चियन र मुस्लिमले जोगाइदिए: कमल थापा (भिडियो)
२५ माघ - पहिलेकै जस्तो सक्रिय राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रम पूर्व राजामा होला भन्ने मलाई लाग्दैन
अर्थमन्त्रालयमै मेरो दावी छ, पहिलेभन्दा राम्रोसँग चलाउँछुः सुरेन्द्र पाण्डे
२० माघ - पार्टीभित्रपनि कतिपयले यस्तै भन्दिने, ‘झलनाथ खनाल र सुरेन्द्र पाण्डेबीच साढुदाई–साढुभाईको सम्बन्ध छ’ भनेर प्रचार गरिदिने। यस्तो भएपछि मैले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नै भनें, ‘झलनाथ खनाल र मेरो म्याडमको थर मिल्छ भन्दैमा साढुदाई–साढुभाई भनेर आरोपित...
चीनका राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गर्नेमा अब शंका छैन: डा. मास्के
१६ माघ - चिनियाँहरूले हामीलाई नेपालमा स्थायी सरकार नभएकाले राष्ट्रपतिको भ्रमण हुन नसकेको संकेत दिँदै आएका थिए। अब परिस्थिति फेरिएको छ। नयाँ सरकारले चीनका राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणका लागि औपचारिक निमन्त्रणा पठाउनु पर्छ। र अब राष्ट्रपति सीले नेपाल भ्रमण...
विद्यार्थीलाई आवश्यक मार्गनिर्देश गर्न एजुकेशन फेयर गर्न लागेका हौँ: खेम संग्रौला
११ माघ - दशक देखि अस्ट्रेलिया अध्ययन गर्न चाहने नेपाली विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक परामर्श तथा भिसा प्रक्रियाको सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको एक्सपर्ट एजुकेशन एण्ड भिजा सर्भिसेजले यहि माघ १३ गते शनिबार (जनवरी २७) मा काठमाडौँको होटल अन्नपूर्णमा ग्रण्ड अस्ट्रेलियन...
राजश्वमाथि लुटपाट रोके प्रदेश चलाउने पैसा आइहाल्छः डा. पाण्डे
१० माघ - हामी लोकतन्त्र, गणतन्त्र हुँदै संघीयतामा आइपुगेका छौं। यी सबै संरचनाबाटै हामीले समतामूलक समाज खोज्या हौं। त्यति गर्दागर्दै पनि मान्छेको मनमा ‘जे गरेपनि किन भैरहेको छैन त’ भनेर किन परेको हो?
६ माघ - दिल्लीले वामगठबन्धन फुटाउन प्रयास गरिरहेको चाल पाएपछि प्रचण्डजीलाई घरमै भेटेर भनेको छुः ‘तपाईंले जसरी एक भएर जुनाव जित्नुभयो यो खेर नजाओस्। देश फेरि प्रतिगमन र राष्ट्रघाततिर नजाओस्। तपाईंले जसरीपनि यो एकतालाई कायम गर्न कोशिस गर्नुपर्छ।’
एमाले-माओवादीबीच जति समयका लागि भएपनि एकता हुन्छ: बाचस्पति देवकोटा
२९ पुस - एमाले–माओवादी एकतालाई जनताले अनुमोदन गरिसके। बल अब नेताहरूको कोर्टमा छ। तर एकताका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ किचन मेम्बरहरुको स्वार्थ।
२७ पुस - बहुमत प्राप्त दल कुनै छैन तर एमाले र माओवादी गठबन्धन एकीकृत भएर जाँदैगर्दा दुई वा दुईभन्दा बढी दलले सरकार बनाउन सक्ने अवस्थामा पुग्छन्। नेपाली कांग्रेस अब जटिलतालाई हल गर्दै नयाँ सरकार गठनलाई मार्गप्रशस्त गर्नेतर्फ लाग्छ।
बालकोट बैठकबाट निस्केलगत्तै बामदेवले भनेः ओली बैंककबाट फर्केपछि पार्टी एकता कार्यदल
२५ पुस - लामो प्रतिक्षापछि एमाले–माओवादी केन्द्र पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक मंगलबार सम्पन्न भएको छ। बहुप्रतिक्षित बैठक लगत्तै समितिका सदस्य तथा एमालेका बरिष्ठ उपाध्यक्ष बामदेव गौतमसँग नेपालखबरले गरेको संक्षिप्त वार्ताः
‘ओली र प्रचण्डबीच बराबरीको आधारमा पावर सेयरिङ हुनुपर्छ’
१३ पुस - मणि थापा भन्छन् : ईश्वर पोख्रेलले जसरी बोल्नुभयो, उहाँको भनाईले माओवादी पंक्तिभित्र संशय जन्माएको छ, उहाँले भनेजसरी नै जाने हो भने एकताको सम्भावना नै दुर भएर जान्छ।
वाम गठबन्धनलाई सरकार बनाउन हाम्रो खाँचो पर्दैनः उपेन्द्र यादव
११ पुस - नेपालखबरः प्रचण्डले पनि भने, एमालेले तपाईंहरुसँग सरकार गठनका लागि हात बढाएको छ रे? उपेन्द्र यादवः प्रयास गर्नु नराम्रो कुरा हो र? प्रयास त गरिहाल्छन् नि, त्यो त स्वभाविक कुरा हो। सरकार गठनका सम्बन्धमा सबै पार्टीसँग हाम्रो कुराकानी भइरहेकै छ।
६ पुस - जाडो सुरु भइसकेपनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ४ पुषमा हिमाली जिल्ला रसुवा पुगे, केही एमाले नेताहरुका साथमा। तिनमा एक थिए, स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल। यसैले देखाउँछ कि, पोखरेल ‘हुनेवाला’ प्रधानमन्त्री ओलीका कति निकट छन्!
२९ मंसिर - वामतर्फ ढल्किएको लोकतन्त्र नै नेपालको अहिलेको आवश्यकता हो। र, यसको अन्तिम लक्ष्यचाहिँ समाजवाद उन्मुख नै हुनुपर्छ।
२८ मंसिर -
२३ मंसिर - ‘राजनीतिक प्रतिनिधि जनताका वास्तविक सेवक हुन्छन् भन्ने मान्यताका साथ मैले प्रत्येक महिना जनताको घरदैलोमा जाने प्रतिवद्धता पूरा गरें। अब पनि म घरदैलोमा गएर जनताको पीर, मर्का बुझ्ने जनताको समस्या समाधान गर्ने कोशिस गर्नेछु।’
२४ मंसिर - ‘१० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गराउन ठूलठूला आयोजनामै जानुपर्छ। ६ लेनका सडक, पूर्व–पश्चिम र चीन–भारत जोड्ने रेलमार्ग, बुढीगण्डकी र कर्णाली चिसापानी जस्ता ठूला जलविद्युत आयोजनामा जानुपर्छ।’
१८ मंसिर - १६ कार्तिकमा दोस्रो चरणको उम्मेदवारी दर्ताका लागि चितवन–३ मा राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) का प्रतिस्पर्धी बिक्रम पाण्डेसँगै थिए, बद्री तिमिल्सिना। यो उनको दायित्वपनि थियो, किनभने पाण्डेका दाहिने हात मानिने उनी पार्टीको जिल्ला अध्यक्ष थिए। स्थानीय तह...
१६ मंसिर - म ५६ वर्षको भैसकें। १७ वर्षको उमेरमा हाइस्कूलको पढाइ सकेर हङकङबाट नेपाल फर्किएयता मेरो जीवनका ३०-४० वर्ष विभिन्न आन्दोलनमा बितेछ। मसँग लड्न फेरि अर्को उर्जा हुन्छ कि हुँदैन, मलाई थाहा छैन।
१३ मंसिर - गिरिराजमणि पोखरेल माओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य हुन्। दुई पटक स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रीसमेत भएका पोखरेल माओवादीभित्रका एकजना शालिन नेता मानिन्छन्। महोत्तरी १ बाट दुवै संविधानसभा चुनाव जितेका र अहिले त्यही क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको...